ICasa Tranquila, iPlaya Guasacate, iPopoyo - I-Airbnb
ICasa Tranquila, iPlaya Guasacate, iPopoyo
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguFyfe
Le ndlu yolwandle yokwenyani ilungele isibini okanye iintsapho ezincinci. Uyilo lweplani yomgangatho ovulekileyo luvumela undwendwe ukuba luzintywilisele kwi-beach vibe kunye neembono zalo ezimangalisayo zolwandle kuzo zonke iindawo zendlu. I-Casa Tranquila ithetha indlu yokuphumla, uyakonwabela ukuzola kolwandle oluhle olunesanti olude oluyi-2km kunye nokufikelela kwezinye zeNicaraguas zolonwabo olufana nokusefa, ukuloba kunye ne-kayaking. Ukuba ujonge incasa yokuphumla yeparadesi yaseNicaragua, ungajongi okunye.
Inyathelo elinye ukusuka kwiveranda engaphambili liya kukubeka kwisanti ethambileyo yePlaya Guasacate (iGuasacate Beach) edume ngokusefa, ukuloba, ufudo kunye nokutshona kwelanga okuhle ubusuku ngabunye ngaphandle kokusilela. I-Casa Tranquila ivumela iindwendwe ukuba zivuke kwizandi ze-pacific ocean, ingoma emnandi ye-Zanate (intaka yendawo). Ipropathi ibonelela ngokuphuma ngaphandle kwangaphakathi kunye neebhalkhoni ezimbini ezintle ngaphambili kunye nee-hammocks ukonwabela umbono wolwandle kunye nomgangatho wabucala ongasemva kunye nesidlo sangaphandle sangokuhlwa kunye nendawo ye-BBQ. Lo mhlaba usanda kulungiswa kwaye watyalwa.
Indawo eyilwe ngenjongo iqaqambisa ulwandle olulula oluhlala elunxwemeni oluhlala kumazantsi eNicaragua.
Indawo entle ibonelela ngokufikelela kwimithombo eshushu yalapha ekhaya, ukukhwela ihashe, ukuloba, ukuhamba ngesikhephe, ukukhwela inqanawa, i-kayaking kwaye ngokuqinisekileyo enye yeyona ndlela imangalisayo yokusefa kuMbindi Merika. Iibhodi zokusefa, iikayak kunye neziThuthuthu ziyafumaneka ukuze ziqeshwe xa ziceliwe. Ulwandle lukwabamba uluhlu olubanzi lweendawo zokutyela ezimangalisayo ezinikezela ngokukhetha okumnandi kwasekhaya nakwamanye amazwe. Ukongeza koku kukho iilori ezi-2 ezincinci zegrosari kunye neziqhamo kunye nemifuno ehamba yonke imihla. Omnye umtsalane omangalisayo kule ndawo uquka iChacocente National Reserve apho iifudo zifika ngamanani amaninzi ngamaxesha athile onyaka.
Umbuki zindwendwe ngu- Fyfe
Mna ngokwam ndihlala ndifumaneka nge-imeyile, nangona zonke iimfuno kunye neemfuno zondwendwe zinokukhathalelwa ngumphathi wepropathi osoloko ekhona kwaye angaze abe ngaphezu kwe-5mins kude.